Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Duugista ah. Warshad Qalabka Maydhashada Shiinaha
Burushka Shaambooga Ey Shaashka
1.This Brush Shampoo Brushing Brush waa mid aad u fudud in la qabto oo ku habboon milkiilayaasha qubeyska siiya xayawaannada kaligood ah.
2.Buraashka nadaafadda ee shaambo eeygu wuxuu leeyahay nabarro jilicsan, ma dhaawici doono dhogorta iyo maqaarka waxaadna si sahal ah uga saari kartaa xayawaankaaga xayawaanka ah.
Kaydinta meertada yar, uma baahnid inaad u fidisid shaambada iyo saabuunta intaad dhaqaysid xayawaankaaga. Burushkan waxaa loo isticmaali karaa in lagu maydho iyo waliba duugista eeyaha.
4.Kali ah cadayashada xayawaankaaga yar, burushkan qurxinta shaamboo eey ah wuxuu sameyn karaa xumbo qanjir ah si uu eygu uga nadiif ahaado burushka kale ee caadiga ah.
Burushka Maydhashada Eeyaha
1. Burushkan qubeyska eey ee culus ee culeyska culus wuxuu si fudud u qaadaa timaha iyo daboolka dabacsan iyadoo aan la qabsanin waxyaalo isku dhafan oo aan dhib u keenin eeygaaga. Xadhkaha jilicsan ee jilicsan ayaa u shaqeeya sidii soojiidashada wasakhda, boodhka, iyo timaha dabacsan.
2. Buraashka qubeyska eeygan wuxuu leeyahay ilig wareegsan, Ma dhaawaceyso maqaarka eyga.
3. Burushka Maydhashada Eyga waxaa loo isticmaali karaa in lagu salaaxo xayawaankaaga, xayawaankuna waxay bilaabi doonaan inay ku nastaan ​​dhaqdhaqaaqa burushka.
4. Dhinaca cusub ee aan sibiibixsan ku qabsan, waad adkeyn kartaa xajinta marka aad eeygaaga u duugeyso, xitaa qubayska.
Ey dhaqo Buufiyo Maydho
1.Eygan buufiye qubeyska lagu maydho wuxuu isku daraa buraashka qubeyska iyo buufinta biyaha.Ma aha oo kaliya inuu qubeysan karo xayawaanka, laakiin sidoo kale wuu u duugi karaa.
2.Professional dog dog spray the spray, spray contoured, qaab qafiif ah oo qaabeysan oo loogu talagalay in lagu dhaqo eeyaha dhammaan noocyada iyo noocyada.
3.Laba qaboojiyeyaasha qasabada laga saari karo, rakib oo ka saar si fudud gudaha ama bannaanka.
4.Er eeyaha buufinta qubeyska si weyn ayuu u yareeyaa biyaha iyo isticmaalka shaamboo marka la barbar dhigo hababka dhaqida dhaqameed.
Xayawaanka dharka timaha ee dharka lagu maydho iyo cadayo duugista ah
1.Beting Triming Triming Mayhing Iyo Massage Brush waxaa loo isticmaali karaa qoyan ama qalalan labadaba Waxaa loo isticmaali karaa oo kaliya burushka qubeyska si loogu nadiifiyo timaha xayawaanka, laakiin sidoo kale waa qalab duugis ah oo loogu talagalay laba ujeedo.
2.Made oo ah qalab tayo sare leh oo TPE ah, jilicsan, dabacsanaan sare iyo waxyaabo aan sun ahayn.With naqshad tixgelin leh, fududahay in la qabto oo fududahay in la isticmaalo.
Ilkaha dhaadheer ee bidixda ahi si qoto dheer ayey u nadiifin karaan una daryeeli karaan maqaarka, waxay si tartiib ah uga saari kartaa timaha dabacsan iyo wasakhda, kordhinta wareegga dhiigga waxayna ka tagaysaa dharkaaga xayawaankaaga jilicsan oo dhalaalaya.
4. Ilkaha laba jibbaaran ee korka ku yaal ayaa masaaji kara oo nadiifin kara xayawaanka 'wejiga, cagaha iyo wixii la mid ah.